Angase agwetshwe iminyaka engu-10 owayedlala kwiBarcelona | News24
Angase agwetshwe iminyaka engu-10 owayedlala kwiBarcelona
Barcelona – Abashushisi baseSpain sebecele ukuba umdlali waseCameroon, uSamuel Eto'o, agwetshwe iminyaka engu-10 ebhadla ejele bese ephinda ahlawuliswa u-€14.3-million ($15 million) ngaphezulu ngezinsolo zokukhwabanisa okuthinta ukukhokhwa kwentela, lokhu kuvele kwifayela lasenkantolo ngoLwesine.
Laba shushisi basola ukuthi lo mdlali osegijima kwi-Antalyaspor, eTurkey, wasungula izinkampani ukuze acashe ngazo khona engeke ayikhokhe intela kusukela ngonyaka ka-2006 kuya kunyaka ka-2009, ngenkathi esengumgadli weBarcelona, ngaphambi kokuba aye kwi-Inter Milan.
OLUNYE UDABA: UMessi unqabe umklomelo kuhlulwa i-Argentina
Kuthiwa lokhu kukhwabanisa kulinganiselwa enanini lika-€3.9 million.
“Lo mdlali wenza sengathi usenikezele ngamalungelo akhe kwezinye izinkampani ezimbili eHungary naseSpain ukuze agweme ukukhokha intela,” babeke kanjalo ngokwezinsolo ezibonwe abakwa-AFP.
Laba shushisi bakhala ngokuthi imali eyatholwa yilo mdlali ngenkampani yakhe eseHungary akuzange kukhokhelwe intela eSpain kuyona.
Manje bathi lo mdlali osebe umdlali ovelele e-Afrika izikhathi ezine kumele akhokhe le mali okusolwa ukuthi wayikhwabanisela intela, bese ephinda ekhokha ne-interest yakhona kanye nenhlawulo engu-€14.3-million.